Hira ara-pilazantsara : ho tonga eto amintsika ny Héritage | NewsMada
Hira ara-pilazantsara : ho tonga eto amintsika ny Héritage
Ho an’ny mpankafy hira ara-pilazantsara, tsy zovina amin’izy ireo intsony ny Héritage, tarika ahitana ny fampiaraham-peon’i Sebastian Demrey sy Jimmy Lahaie. Ho tonga eto amintsika izy roa lahy ireo ary hanatontosa fampisehoana indroa miantoana : ao amin’ny Carlton Anosy, ny 6 febroary ary etsy amin’ny CC Esca etsy Antanimena, ny ampitson’io. Samy iarahan’izy ireo amin’i Carla Antoun, mpitendry lokanga fanta-daza, ireo fotoana roa ireo.
Tafiditra ao anatin’ny fitetezam-paritra voalohany hotanterahin’ny tarika amin’ity taona ity izao fandalovany eto amintsika izao. Ny aty amin’ny ranomasimbe Indianina no hanombohany izany ka hiaka-tsehatra atsy La Réunion sy Maorisy izy ireo, ny 22 sy 29 janoary izao. Aorian’ny aty Madagasikara, hiverina any Frantsa, avy eo, hihazo an’i Romania ny Héritage.
Manana ny mampiavaka azy amin’ny mpihira ara-pilazantsara hafa ry Sebastian Demrey sy Jimmy Lahaie. Eo aloha ny filalaovana ny gitara « acoustique ». Etsy ankilan’izay, mamelo-maso ireo hira fiderana nalaza fahagola ny tarika.